Actorylọ ọrụ Nkwado Waist - Ndị na - enye nkwado nke China, ndị na - enye ya
Etu na-enweghị isi
Igwe eji edozi ukwu ya dị mfe, dị gịrịgịrị, dị nro ma nwee ikuku. Ọ nwere ike inyere gị aka ịkpụ usoro zuru oke. Mgbatị ahụ maka nkeji iri na akwa a ga-eme gị ọsụsọ. Udiri eriri na-agbanwe agbanwe okpukpu abụọ nwere ike ijide n'aka na ị ga-enwe ezigbo mkpakọ ma na-emekwa ume. Dabara na ahụ gị nke ọma ma gosipụta ezigbo ahụ gị. Otutu agba na agba dị, OEM na-anabatakwa.
Ihe anyị pụrụ iche, akwa mkpuchi sion sion, nke a na-eji ekpokọta ọkụ mgbe ị na-eyi, mana ka na-eku ume ma na -eme gị mma, ma na-ewetara gị mgbakwunye kachasị mma na ọsụsọ karịa karịa ụdị nkịtị nke ọsụsọ dị n'úkwù, n'ihi ya ọ nwere ike ịkpụ ahụ gị n'oge dị mkpụmkpụ. . Ngwa ahụ dị mfe ma dịkwa mma, ọ gaghị abụ ibu arọ ma ị na-emega ahụ.